बजेटविहीन देशः कस्को तलव रोकिने, कस्को नरोकिने ? |
Home राजनीति बजेटविहीन देशः कस्को तलव रोकिने, कस्को नरोकिने ?
बजेटविहीन देशः कस्को तलव रोकिने, कस्को नरोकिने ?
काठमाडौं- मुलुक बजेटविहीन हुने निश्चित भएको छ । सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको र र अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बुबधबार रातिबाट निष्क्रिय हुने भएपछि ‘बजेट होलिडे’तर्फ देश अघि बढेको हो ।